Muqdisho: Laamaha amaanka oo baadi goobaya gaari looga shakiyey Ismiidaamin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Laamaha amaanka oo baadi goobaya gaari looga shakiyey Ismiidaamin
A warsame 1 April 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Laamaha Amaanka Soomaaliya ayaa baadi goobaya gaar laga shakiyey iney ku raranyihiin walxaha qarxa, waxaana arrintaas shaaciyey afhayeenka booliska Maxamed Cumar Madaale.
Jeneraal Madaale oo warbaahinta Muqdisho kula hadlay, ayaa shacabka Soomaaliyeed uga digay inaysan udhawaan gaari uu tilmaama ka bixiyay.
Wuxuu sheegay in nooca gaariga uu yahay Surf/Runeyd kaasi oo ku dhexjira magaalada Muqdisho, hay’adaha ammaanka dowladda Soomaaliyana ay baadigoob ugu jiraan.
Afhayeen Madaale ayaa Taariikada Baabuurkaasi ku sheegay AC 8283 ama 8382, waxaana uu shacabka uga digay inay ka fogaadaan gaariga noocaasi ah oo aysan udhawaan, isaga oo intaasi raaciyay in hadii ay shacabka arkaan gaarigaasi ay kusoo wargeliyaan laamaha ammaanka dalka.
“Baabuur Surf ah oo madow, muraayadahiisana madow yahay, taargada uu wato ay tahay AC 8382 ama 8283, meel ala meeshii lagu arko booliska iyo hey’adaha amniga ha lagu soo wargeliyo, baabuurkaas waxaa looga shakisan yahay inuu saaran yahay waxyaabaha qarxa” ayuu yiri Jen. Madaale.
Madaale ayaa sheegay in gaarigaasi yahay madow, islamarkaana muraayadaha gaarigaasi yihiin bensal.
Ciidamada Booliiska iyo Nabadsugida Soomaaliya ayaa waxa uu amar ku siiyay Afhayeenka Hay’addaha ammaanka dalka inay soo qabtaan gaarigaasi iyo cida wada si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado.
Sidoo kale waxaa uu ugu baaqay shacabka inay u diidaan gaarigaas in la soo dhigo goobaha ganacsiga hortooda oo Parking ahaan loo dhigo, waxaana uu ka codsaday shacabka inay ku soo wargeliyaan ciidamada hadii ay arkaan.
Ciidamada Booliska iyo kuwa nabadsugida ayaa xaafadaha qaar ka wada howl galo ballaaran oo lagu baadigoobayo gaarigaan laga war helay in waxyaabaha qarxa uu saaran yahay, iyadoo maanta wadada Maka al-Mukarama iyo wadooyinka kale gaadiidka laga shakiyo la joojinayay, dabadeedna la baarayo.
Somali Police Force capture men and their weapons
Raysul wasaaraha oo Muqdisho kula shiray wakiilo ka socday dalalka maaligeliya Hiigsiga Cusub